Maxaa ku cusub Horyaalka Premier League oo aad kala kulmi doontaa? | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Maxaa ku cusub Horyaalka Premier League oo aad kala kulmi doontaa?
(10-08-2018) Horyaalka Premier League oo lagu sheego kan ugu xiisah badan Caalamka oo dhan ayaa daaha laga rogi doonaa 10 ka bishaan oo ku beegan Jimcaha soo aadan waxaana lasoo saaray shan Waxyaabood oo ku xusub xili Cayaareedkaan 2018-2019.
Hadaba waa maxay shantaas wax yaabood ee ku cusub Premier League Xiligaan?
1 Waxa shaqan gelaya sharciga cusub ee suuqa kala iibsiga Horyaalka Premier League kaas oo markii u horeysey xirmi doona Khamiista Saacada London marka ay tahay 5pm waxaana sharcigaan uu yahay kaliya mid ku kooban Kooxaha England.
2 Sharciga Cusub ee xiligaan ka dhaqan geli doona England kaas oo saameyn doona Macalimiinta Gaar ahaan koobka Football League, oo lagu Tijaabin doona waana mid Macalimiinta lagu siin doono Jaale iyo Roose sida cayaartoyda.
3 Markii ugu horeysey oo lagu dheeli doono kubad Cusub oo midabkeedu cad iyo madoow yahay waxaana farasanaysey shirkada Nike waxaana durba bilaawday Cabashada Goolhaye yaasha Premier League ee kubadaan.
4 Horyaalka Premier League ayaa lagu dheeli doonaa Garoonkii 59 aad kaas oo Noqon doona Garoonka Cusub ee kooxda Tottenham shisatay dhawaan oo kulanka ugu horeeya ee lagu Cayaari doono uu noqon doono mid dhex mari doonaa Tottenham iyo Liverpool.
Garoonkaan ayaa ah kan labaad ee ugu weyn Horyaalka England isaga oo qaada 62,062, oo qof kaliya waxaa ka qaad weyn Old Trafford.
5 Xili cayaareedkaan bilaaban doona Jimcaha waxaa ka soo muuqan doona Garsoorayaal cusub kuwaas oo lagu kala Magacaabo Simon Hooper iyo David Coote oo dhexda ah iyo Neil Davies iyo Dan Robathan. oo Calanhaye yaal ah.